Lahatsary fohy nataon’ny tanora Kambodziana hampahafantarana ny ady atao amin’ny fanelezana vaovao diso momba ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Lahatsary fohy nataon'ny tanora Kambodziana hampahafantarana ny ady atao amin'ny fanelezana vaovao diso momba ny COVID-19
Lahatsary 14 niatrika famaranana tamin'ny fifaninanana fanamby media sosialy
Voadika ny 01 Janoary 2021 17:47 GMT
ireo mpandray anjara tamin'ny fifaninanana lahatsary momba ny fanamby natrehan'ny tanora ao Kambodza nandritra ny valanaretina COVID-19. Loharanon-tsary: pejy Facebook-n'ny Ivontoerana Kambodziàna ho an'ny Media Mahaleotena (CCIM).
Namoaka lahatsary fohy miisa 14 ny Cambodian Center for Independent Media (CCIM), vondrona fiarahamonimpirenena manandratra ny fanabeazana momba ny media sy ny zo nomerika, hanasongadinana ny anjara toeran'ny tanora mpampiasa aterineto amin'ny fisorohana ny tsy hiparitahan'ny vaovao diso mifandraika amin'ny valanaretina COVID-19.
Tamin'ny 24 Desambra, nambaran'ny CCIM ireo tonga tamin'ny dingan'ny famaranana tamin'ilay fifaninanana lahatsary nomena lohahevitra hoe “Ireo Fanamby Atrehan'ny Tanora ety anaty Media Sôsialy Mandritra ny COVID-19″, ary nambarany ny tanjony:
Ny tanjon'ity fifaninanana ity dia ny handrisika ny tanora hampiasa ny media sôsialy amin'ny fomba maha-tomponandraikitra sy azo antoka, ary hampiroborobo ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fampitambaovaovao.
Nandresy ny lahatsary novokarin'i Hung San Socheata sy Antong An. Nitondra ny lohateny hoe “Sabatra roa lela,” soritsoritan’ilay lahatsary ny hery ananan'ny media sôsialy hanomezana vaovao eo noho eo, saingy mety koa ho sehatra iray hanelezana vaovao diso.
Ny mpifaninana nahazo ny voalohany dia ny lahatsary novokarin'i Chao Ly Hoang, Nguon Huy Tieng, sy Prum Sok Leng, nomena ny lohateny hoe “Fiainana andro iray nandritra ny Covid-19.” Asian'izy io tsindrimpeo ny lanjan'ny mahazava-dehibe ny fanjifàna sy fizaràna vaovao ety anay media sôsialy, no sady angatahany ny mpianatra mba ho tomponadraikitra kokoa amin'ny fitantanana ny fotoanan-dry zareo rehefa miditra ety anaty aterineto.
Ny toerana fahatelo dia lasan'ny lahatsary novokarin'i Chhil Chek sy San Chan Monineath. “Resaka tsy mifankahazo” ilay lahatsary, ary manipika ireo vokatry ny fampiasàna vaovao tsy voamarina ety anaty tambajotra entina hiatrehana ny COVID-19. Asongadin'ilay fitantaràna ny tovolahy iray manamboatra “ting mong” (sariolona) ary nampiasa tongolo lay voatoto, sakay ary akoran'atody mba hitsaboany ny anabaviny tamin'ny COVID-19.
Iray hafa tamin'ireo tonga tamin'ny famaranana ny lahatsary “Mitandrema, Mety ho Lasa Tena Izy ny Nofinao,” izay manome taridàlana tena ilaina momba ny fomba hamantarana ny “vaovao fako” ety anaty media sôsialy.
Ny lahatsary “Ovy ratsy” dia natao handrisihana ny tanorao Kambodziàna handany fotoana amin'ny fomba tsara miaraka amin'ny fianakaviany raha mbola mitohy manelingelina fiainan'olona maro kosa ny fihibohana aterak'ilay valanaretina.
Ny lahatsary “Fahalotoana” dia manome torohay tena ilaina momba ny fampiasàna ny media sôsialy ao Kambodza sy ny fomba mety hahatonga ny fandisoambaovao, na ny “fahalotoana” hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamàn'ny vondrompiarahamonina ety anaty tambajotra.
Tamin'ny 15 Desambra, ni 362 ireo tranga voarakitra tao Kambodza, ka 312 no sitrana. Ny 23 Desambra, nisy tatitry ny vaovao nanamarika hoe tsy misy tranga COVID-19 vaovao voatily intsony tao amin'ny firenena ary 14 sisa ireo olona mbola manaraka fitsaboana.
Na efa kely aza sisa ny isan'ireo tratry ny COVID-19 ao amin'ny firenena, marobe ireo mpanao gazety sy mpanakiana no ampangain'ny governemanta ho nanely “vaovao diso” momba ilay valanaretina. Nampitandrina ireo vondrona mpiaro zon'olombelona hoe araraotin'ireo manmpahefana hanampenana ny vavan'ireo tsy mitovy hevitra aminy ny fisian'ilay krizy ara-pahasalamàna.
17 ora izayFilipina